Dib u eegista Blog: Dave Woodson, La Taliyaha Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Dib u eegista Blog: Dave Woodson, La-Taliyaha Warbaahinta Bulshada
Talaado, September 14, 2010 Talaado, September 24, 2013 Douglas Karr
Dave Woodson waa lataliye baraha bulshada iyo teknoolojiyadda kuwaas oo ka caawiya ganacsiyada joogitaankooda internetka. Dave wuxuu dib u eegis weyn ku sameeyay buugga qoraalka waxaan qornay oo aan dul saarnay Barnes iyo Noble. Sidii lagu balamay, waxaan sameyneynaa dib u eegis ku saabsan bartiisa si aan u siino xoogaa jawaab celin ah oo wax ku ool ah si loo waafajiyo! Halkan ayaa socda:
Isla markiiba lama ogaan karo waxa ujeedada bartaada waa booqde cusub. Waxaan u baahday inaan aado 'About' si aan runtii dareen ugu helo wixii aad ku qoraysay. Waxaan kugula talin lahaa inaad ku qorto shax ama qoraal ku qoran dhinaca midig ee sharxaya ujeedada bartaada.
Maaddaama aad ka caawiso ganacsiyada warbaahinta bulshada iyo teknolojiyadda, waxaan kugula talin lahaa wax weyn wicitaan-ku-dhaqaaq (CTA) dhinaca midig ee kore ee boggaaga bog kasta oo ogeysiinaya dadka waawayn inaad diyaar u tahay kireysi. CTA-daas waa inay shaqsi u gudbiso a bogga soo degitaanka oo leh foom xiriir labadaba iyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan macaamiisha iyo adeegyada aad bixiso.
Waxaad leedahay madax weyn iyo astaan… qaado astaanta oo u sameyso astaan ​​bartaada. Waa tan qoraal ku saabsan sida loo sameeyo favicon.
Your robots.txt Faylka wuxuu ku jiraa asalka boggaaga wuxuuna leeyahay liiska bogga map.xml - taasi waa wax laga naxo! Waan saxi lahaa feylka waxaanan u diidi lahaa taraafikada wixii / wp- * diiwaanka ama feylka - tani waxay ka joojin doontaa matoorada raadinta inay tilmaamaan tusahaaga maamul.
Jidkaaga URL (permalink) waa yaab - waxay umuuqataa inay jiraan khadadka lambarka boostada. Uma maleynayo inay taasi ku dhaawaceyso, laakiin waa wax yar. Maaddaama aadan ku sarreynin natiijooyinka raadinta kasta (waan isticmaalaa Xeebaha si loo xaqiijiyo), waa laga yaabaa inaan jiido taas, waxay umuuqataa wax yar oo spammy ah. Waxaad isticmaali kartaa sharciyada htaccess si aad u bedesho permalink. Waxaan ugu jeclahay waa /% magaca dambe% /. Qaab dhismeedka URL saameyn badan kuma yeesho sidii hore, laakiin yaa garanaya goorta uu soo laaban doono!
Naqshadeynta bartaada ayaa cabsi badan - waa wax iska cad oo sahlan in wax walba la arko. Waan jeclahay baarkaaga Apture ee dusha sare ah, runti wuu yareeyaa isku buuqa dheeraadka ah ee bogga.
Waxaan jeclaan lahaa inuu jiro wax weyn sawir idinkaa ku jira madaxa. Dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan cidda Dave yahay - iyo sawir weyn ayaa bixin doona taabashadaas shakhsi ahaaneed ee dhisi doonta kalsoonida waxayna kugu aqoonsan doontaa dadka ku soo dhaca bartaada. Waxaan hayaa sawirkeyga meel walba, xitaa aniga kaararka ganacsiga. Markuu qof qaato kaarkayga dhawr toddobaad ka dib, way xusuusan doonaan qofka aan ahaa. Uma sameeyo kaliya sababtoo ah waxaan u maleynayaa inaan qurux ahay;).
Qoraaladaada sifiican ayaa loogu qoray kala fogaansho weyn oo u dhexeeya baaragaraafyada iyo adeegsiga liistada. Liisaska ayaa aad waxtar u leh marka wax la qorayo maadaama dadku si fudud iyaga u iskaan ugu diri karaan. Waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad waxyar kor u qaaddo qoraalkaaga oo aad u adeegsato ereyo geesinimo leh oo farta ku qoran ereyada muhiimka ah ee aad rabto inaad guriga ugu kaxeyso waxyaabahaaga.
“Baraha bulshada & tiknoolajiyada” waa weedho muhiim ah oo aad iyo aad u ballaaran oo tartan ku saabsan cinwaanka bartaada. Ma jiraan meel gaar ah oo aad beegsan karto oo cidhiidhi ah iyo in yar oo dabada-dheer ah? Adoo bartilmaameedsanaya ereyada-dabada-dheer, waxaad ka heli kartaa taraafikada ku habboon dhaqso raadinta. Mid ka mid ah ereyada noocaas ahi waa adeegsiga baraha bulshada ee ganacsiga. Kaliya waxay heshaa qiyaastii 30 baaritaan bishii, laakiin taasi waa 30 booqdayaal cusub oo ku soo gala bartaada bil kasta.
Waxaad xoogaa dul mari doontaa wadaagida xiriiriyeyaasha. Si daacadnimo ah uma arkin shaqadan mid kamid ah shaqadan marka laga reebo badhanka Twitter-ka ee Twitter-ka (oo aad horey u laheyd) iyo Badhanka sida Facebook.
Isku xidhkaaga page xiriir wuxuu ku aasan yahay badhanka hagiddaada. Macluumaadka xiriirka sida lambarka taleefanka, cinwaanka, ama bogga xiriirka ee la xiriira oo leh foom waa inuu ahaadaa mid sahlan in laga helo baloog kasta. Dadku waqti uma qaataan inay ku soo wareegaan goobta ... haddii ay ku heli waayaan, way iska baxaan. Waxaan ku dhiirrigelinayaa ganacsiyada qaarkood inay ku dhejiyaan macluumaadkaas madax kasta iyo lug kasta.
Fursadda ugu weyn ee aan kuu arko waa inaad uga faa'iideysato balooggaaga si jaban iyo juqraafi ahaan soo jiidashada ganacsiyada cusub. Adoo diirada saaraya gobolkaaga oo aad u istaagto sidii lataliye dhanka warbaahinta bulshada ah halkaas, waxaad ka faa'iideysan kartaa raadinta gobolka ee ganacsiyada raadinaya caawintaada. Si kastaba ha noqotee, waa inaad hubisaa inaad haysatid wicitaano wax ku ool ah oo ficil ah iyo degitaan bogagga si ay si fudud kuugula xiriiraan adiga!
Waad ku mahadsantahay fursada aad dib ugu eegi karto bartaada! Aad baadna ugu mahadsantahay dib u eegista buuggeena!
Tags: dynamicsEdwardsJDOraclegogol dhaaf
Jooji Qarsoonida martidaada
Baadhitaanka Warbaahinta Bulshadda Qaybta 2aad - Aragti Fog Facebook
Sep 14, 2010 at 10: 29 PM
Sep 14, 2010 at 10: 45 PM
Mahadsanid Doug, waxaad i siisay liis fiican oo dharka lagu dhaqdo oo aan ku shaqeeyo. Kani waa balooggeygii ugu horreeyay ee aan abid sameeyo taasna cudurdaar malaha, laakiin waa garoonkayga tijaabada.
waad ku mahadsantahay fikirkaaga runta ah
Sep 14, 2010 at 11: 29 PM
Waa ku faraxsanahay inaad hesho talobixin noocan oo kale ah. Habka aad naftaada u dhigatid si aad ugu dambeyntii si fiican ugu koraan. Waxaan hubaa inaan rajeynayo inaan kori doono oo miskiin noqon doono maalinna qabow karo.
Sep 15, 2010 at 1: 18 AM
Taasi waa wax laga cabsado inaad taas u sameyso isaga Doug sida aan ogahay inuu si weyn u qadariyo. Waxaan si kal iyo laab ah ugu waafaqsanahay waxyaabo badan oo aad tidhaahdid oo kaliya waxaan haystaa labo "nitpicks" oo yar.
Hadda tani run ahaantii ma khuseyso barta Dave maaddaama sawiradiisu badanaa aysan ahayn middiis laakiin qaarna iyagu yihiin. Kuwaas oo aadan rabin inaad u sheegto makiinadaha raadinta inay gabi ahaanba iska indhatiraan galkaaga wp-ka kujira sida ku cad sawirada la soo geliyay waxay galayaan / wp-content / uploads / iyo boggaga sida xaaskeyga oo kale (iyadu waa fanaanad, iyo hasn ' waan sii waday markaa ma wadaagi doono sababta ay u neceb tahay markaan sameeyo) ka helo taraafiko badan raadinta sawirka. Xusuusin dhinaca ah, ma hubo in tani ay ku beddeshay WP3 oo dhan ama kaliya oo leh karti badan laakiin laakiin uma muuqato inay isticmaaleyso wp-content mar dambe (habka kaliya ee WP3 aan u leeyahay waa mid badan oo aan ahayn 100%, in kasta oo haddii casriyaynta ay kala duwanaan lahayd sidoo kale markaa hadday mid kale ka beddeleen mid cusub, markaa waxay u baahan doonaan inay iyagu iska hubiyaan) laakiin haddii la beddelo markaa way iska dhaafi kartaa dhammaan wp-
Marka xigta, um, Ma aragtay Dave? Dhab ahaan, waxaad dooneysaa sawirkiisa cinwaanka? Oo ma waxaad u maleyneysaa inay suurtagal tahay in mid fiican la qaato? Dave? Hehe, waxaan dhaley Daver. 😉
Anigu shaqsiyan waan necbahay baararka ku soo biiraya boggaga internetka, laakiin wixii aan ka helo waxaan ku ahay dadka laga tirada badan yahay. Mid ka mid ah in kastoo aan aad u door bido barta ku taal boggan kan Dave's. Xagga hoose way ka baxsan tahay jidka mar walbana way muujineysaa. Waqti kasta oo aan wax ka soo baxo korka oo daboolaya waxyaabaha aan dareemayo inay runti wax qalad ah sameyneyso. Waxaa laga yaabaa in haddii baarku had iyo jeer jiro ay fiicnaan laheyd maxaa yeelay waxaad si dabiici ah u hagaajin lahayd warqaddaada, laakiin xagga hoose ee bogga waxay leedahay fursadda ugu yar ee jidka lagu mari karo. Haddii aan hoos ugu sii dhaadhaco akhriska maqaal ma doonayo in aad ka soo baxdo bar xannibaysa sadarka feedhka ee maqaalka, ama wax ka sii xun oo daboolaya dhammaan waxyaabaha ku jira In kasta oo atleast uusan haysan daboolka wax walba oo aan iga codsado inaan u qoro sanduuqa liiskiisa diritaanka, kuwani waa kuwa ugu xun. 🙂
Xadkaaga 3000 wuu i dilayaa 😉
Okay 2 qodobbo kale oo aan kala hadlay Dave in ka badan IM laakiin waxaan is tusay inaan halkaan ku wadaagi doono.
Marka hore waa mid aan ogahay inay dadku labada dhinacba u socdaan. Waxaan doorbidayaa inaanan ku helin maqaalka buuxa bogga hore. Marka hore waxaad helaysaa Bogga Dheeraadka ah ee dheeraadka ah haddii taasi adiga quseyso, laakiin sidoo kale waxay kuu sheegaysaa inaad ogaato waxa qof u helay soo jiidasho ku filan oo uu ku sameeyo wax badan guji. Haddii maqaalka oo dhan halkaas ay ku akhriyi lahaayeen 1 iyo 4 5 50 adigoon ogayn. Sidoo kale waxay u sahlaysaa qof inuu helo maqaal iyaga xiiseynaya isagoon u baahneyn inuu bogag u rogo si uu u gaaro maqaalka soo socda (Dave qoraalladiisu ma dheera intaas laakiin haddii ay yihiin waxay sababi karaan xanaaq iyo dadku ma helayaan maqaalka ay jeclaan lahaayeen. ) Laakiin waan ogahay dadka kale inay dareemayaan ka soo horjeedka arintan runtiina waa nooc shaqsiyeed 50/XNUMX pref.
Midda labaad waxay leedahay nooc qoraal ah oo lala socdo waxa lagu sheegay fiidiyaha. Ilaa Google uu ka akhrinayo maqalka fiidiyowyada (iyo beenta waa inaad ku kalsoon tahay taas, waaa tarjumadayda codkeyga Google waa HORRIBLE) oo gelinta natiijooyinka raadinta waxaad runtii u baahan tahay inaad leedahay qodobbada qunyar socodka ah ee qoraalka ku qoran. In kasta oo qoraallada buuxa ay fiicnaan lahaayeen waan ogahay inay xanuun yihiin laakiin helitaanka liistada liistada dhibcaha ugu waaweyn ayaa caawin kara. Qoraalka meesha ku jira ayaa caawinaya laakiin waxaan u maleynayaa in badan oo ka mid ah waxa dhabta ku jira ay caawin karaan sidoo kale.
Waan ka xumahay inaad ku darto jib dheer on iyo markale dad waawayn oo adiga kugu saabsan oo aad sidan ugu samaysay isaga.
Sep 15, 2010 at 8: 00 AM
Midka kaliya ee aan dib u riixi lahaa ayaa ah inaan dadka ka dhigo guji maqaalka, Richard. Habkani runtii wuxuu u yahay CPM (kharashkiiba kunkiiba) bogag ay xayeysiiyayaashu ku xaragoodaan bixinta bogagga bogga. Waa qaab macmal ah oo lagu kordhinayo aragtiyahooda bogagga si ay lacag badan uga helaan… iyadoo kharashka laga helayo akhristaha.
Ma aanan arag wax caddeyn ah ilaa maanta oo ah in qoraallada qeyb ka mid ahi ay taraafig badan ku sii wadaan goob ama ay u beddelaan beddelaad. Ilaa aan sameeyo, ma sameynayo. 😎
Sep 15, 2010 at 8: 02 AM
Waa bog weyn, Dave! Ha u eegin liiskan inuu yahay mid muhiim ah, looma jeedin sidaas. Waa jawaab celin wax ku ool ah oo ku habboon inay ka caawiso balooggaagu inuu koro oo uu ganacsi kuu helo!
Sep 15, 2010 at 8: 55 AM
Waa inaan kugu waafaqsanaadaa adiga oo aan aragti buuxda ka helin bogga weyn. Fikradahaygu waa:
1.) Waa inaad ku haysataa boostadaada ugu caansan boggaaga hore qaybta muuqaalka. Kuwani waa waraaqahaaga lacagta ah ee soo saaray dakhliga ugu badan ama wadahadalka. Waxaa jira sabab sababta ay kuugu caansan tahay, laga yaabee inay si wanaagsan u qoran tahay oo ay si fiican ula xiriirto dadka isticmaala badankood. Markaa maxaad ugu sasabi weyday boggaaga hore inkasta oo ay noqon karaan bil ama laba jir. Uma baahnid in lagu aaso quudintaada haddii ay ku siiyaan soo celinta ugu fiican.
2.) Inta soo hartay waa inay ahaadaan noocyo ka mid ah kuwa kuugu cusub quudinta. Dad, IMO u tag bogga hore fikrad guud oo ku saabsan goobta. Waxaad haysataa 30 ilbiriqsi ama laga yaabee inaad kayartahay inaad feejignaantooda ilaaliso. Markaa haysashada suulasha iyo jeexjeexa quudintaada ayaa rajeynaya inay akhristayaasha ku soo jiidan doonaan wax uun. Haddii aad hayso qoraallo buuxa, aniga shaqsi ahaan haddii aanan jeclayn mawduucaaga koowaad ee buuxa markaa malaha inaan sii wado goobta. Laakiin haddii aan fahmi karo mawduucyada iyo qoraalladii ugu dambeeyay ee goos gooska ah waxaan arki karaa wax badan oo ku saabsan goobta oo waxay u badan tahay inaan sii qoto dheeraado.
Waa mid ka mid ah mowduucyada nooca dooda weyn. Waxaan ogaadey in dadka intiisa badan isugu yeera “khabiiro” ama “pro” boggaga ay doorbidaan aragtida boostada oo buuxda bogga hore.
Laakiin marka laga jawaabo doug: Ma arag wax caddeyn ah ilaa taariikhda in farriimaha buuxa ay baabuur badan ku kaxeeyaan goobta ama u beddelaan beddelaad. Ilaa aan sameeyo, Ma doonayo inaan sameeyo. 😎
Sep 15, 2010 at 3: 39 PM
Waan ku raacsanahay in qaar ka mid ah ay tahay nooca CPM ee arrinta. Aniga ahaan inkasta oo aan u maleynayo inay ka caawineyso go'aaminta sheekooyinka booqdaha ay dhab ahaantii akhriyaan marka la barbardhigo ma garanayo haddii ay daryeeleen ku filan inay wax ku akhriyaan iyo in kale. Ma haysto wax aan shakhsi ahaan ugu beddelo oo waxaan rabaa oo keliya inaan ogaado haddii qofku dhab ahaantii daryeelayay ku filan oo ku saabsan inuu horay u socdo ama runti haddii aysan dan ka lahayn inay wax intaa ka badan helaan.
Dhab ahaantii waa inay ka dhigtaa oo keliya qaabka 'JS' ee ballaarinta 'JS' sidaa darteed waxay ku helayaan boggaas, wax yar u arag si aad u go'aansato haddii aad rabto wax intaa ka sii badan, laakiin markaa weli halkaas ayaan ka helayaa maqaal buuxa oo waxaan helayaa xogta aan doonayo. Taasi waxay noqon kartaa midda ugu fudud / ugu fiican ee waxa aan doonayo.
Apr 11, 2011 at 2: 08 PM
Qoraal Cajiib ah! Aad u xiiso badan oo wargelin ah.